Vovobony ambony (107868-30-4) mpamokatra sy mpamatsy - Factory
Ny Pulver Exemestane dia karazana fitsaboana hormone fitsaboana ary fantatra ihany koa amin'ny anarany marika, Aromasin vovoka. Izany dia fitsaboana ho an'ny vehivavy voan'ny kanseran'ny nono.
Vovon-tsavoka roapolo (107868-30-4)
Vovon-tsavoka roapolo (107868-30-4) Description
Exemestane, marika Aromasin. Aromaretina Inhibitor io. Ny môtera atao amin'ny vovobony Raw Exemestane dia toy ny Aromatase Inhibitor.It dia anteriora mampidi-doza ny aromatase izay manakana ny synthesizé estrogen amin'ny vehivavy menavava ary ampiasaina ho fitsaboana ny voan'ny kanseran'ny nono, indrindra taorian'ny resection sy ny tsy fahombiazan'ny tamoxifen. Ny poofa ambony indrindra dia mifandray amin'ny fihenan'ny siramamy tsirom-bovoka mandritra ny fitsaboana sy ny tranga tsy dia fahita eo amin'ny fahasimban'ny aretina.
Ny fitomboan'ny sela dia mety ho miankina amin'ny estrogen. Ny Aromatase (exemestane) dia ny biby enzym izay manova ny androgen ho aostrogens na eo an-dalam-pandrosoana na eo an-jatony. Raha ny loharanon-karazana estrogen (estradiol voalohany indrindra) dia ny ovaire amin'ny vehivavy mialoha ny lahy sy ny vavy, ny loharanon-tsarim-pandrindrana israeliana amin'ny vehivavy menavava dia avy amin'ny fiovan'ny androgen-adrenalina sy testosterone (estrone sy estradiol) amin'ny aromatase enzyme ao amin'ny vatan'ny peripheral. Ny tsy fahampian-tsakafo amin'ny alàlan'ny fitsaboana aromatase dia fitsaboana mahomby sy mifantoka amin'ny marary amin'ny marary sasany amin'ny hormone miankina amin'ny homamiadan'ny nono. Ny vovobon-tsavony roapolo dia tsy azo havaozina, tsy azo atao intsony ny aromatase, izay mifandray amin'ny akora voajanahary androstenedione. Izy dia miasa toy ny foiboka diso ho an'ny anzima aromatase, ary natao ho an'ny diplaoma izay mamatotra tsy azo hivalozana amin'ny tranonkala mavitrika amin'ny enzyme izay mahatonga ny tsy fanaovan-tsoa, ​​vokatra fantatra amin'ny hoe "fanilihana hamono tena". Ny vovobony ambony dia mampihena ny fihenan'ny estrogen circulations amin'ny vehivavy menavava, nefa tsy misy vokany azo tsapain-tanana amin'ny biosynthesis adrenalin'ny corticosteroids na aldosterone. Io fihenam-bidy amin'ny serum sy ny fivontosan'ny estrogen dia mitazona ny fitomboan'ny fivontosana sy ny fivoaran'ny aretina. Ny vovobon-tsavony roapolo dia tsy misy fiantraikany amin'ny etiomena hafa tafiditra ao amin'ny lalan'ny steroidogenic ka hatramin'ny fifantohana farafahakeliny 600 in-droa mahery noho izay manakana ny enzyme aromatase.
Vovon-tsavona roapolo (107868-30-4) Specifications
Product Name Vovoka roapolo vita amin'ny hazo
Anarana simika 6-Methyleneandrosta-1,4-diene-3,17-dione
molekiolan'ny Formula C20H24O2
molekiolan'ny Wvalo 296.41 g / mol
mitsonika Point 155.13 ° C
Solubility water solubility tsy misy loto
Application nohazavaina ho tratran'ny homamiadan'ny vehivavy ao an-kibon'ny vehivavy (vehivavy nandalo ny taona).
WNy hatina dia vovobon-tsoavaly roapolo (107868-30-4)?
Ny vovobony ambony dia fanafody ampiasaina amin'ny fitondrana kanseran'ny nono amin'ny vehivavy izay nandalo ny menopause.
Exemestane / Aromasin poids dia ampiasaina mba hanasitrana karazana homamiadana sasany (toy ny hormone-receptor-tsaratsara-tavy voan'ny hormonina) amin'ny vehivavy aorian'ny taom-pandaminana. Ny Exemestane koa dia ampiasaina mba hisorohana ny homamiadana tsy hiverina. Ny kanseran'ny nono dia natao haingana kokoa amin'ny hormone voajanahary antsoina hoe estrogen. Ny tavy poezia dia mampihena ny habetsan'ny estrogen ny vatana ary manampy amin'ny fampihenana ny fivoaran'ny kanseran'ny nono. Tsy mahazatra ny vehivavy eo amin'ny taovam-pananahana.
Ahoana ny vovo-dronono roapolo (107868-30-4) asa
Maro ny kanseran'ny nono dia maniry ny hitombo amin'ny hormones ho an'ny vehivavy estrogen sy ny progesterone. Ireo kanseran'ny nono ireo dia antsoina hoe hormone sensitive or hormone receptor positive. Ny fanakanana ny fiantraikan'ireny hormones ireny dia mety ho voan'ny kanseran'ny nono.
Ao amin'ny vehivavy izay manana ny fihenan'ny menopause, estrogen dia novokarina indrindra amin'ny fanovana ny androgens (hormonina ho an'ny tovovavy novidin'ireo lohan'ny adrenal) ao anatin'ny ompa. Ity dingana ity dia antsoina hoe aromatisation ary mitranga indrindra amin'ny tavy, ny muscle ary ny hoditra. Ilaina ny anzima iray antsoina hoe aromatase.
Ny Exemestane dia manakana ny dingan'ny famokarana. Noho izany dia mampidina ny habetsan'ny estrogen ao amin'ny vatana. Ny kanseran'ny nono dia mety hanampy amin'ny fijanonan'ny kanseran'ny nono. Ao amin'ny kanseran'ny nono, mety mihamalalaka kokoa ny sela avy amin'ny sela ka tsy mihombo tanteraka.
Vovon-tsavona roapolo (107868-30-4) levitra
Ny dosilin'i AROMASIN amin'ny homamiadana vao haingana sy efa voatra dia iray tabilao 25 mg indray mandeha isan'andro aorian'ny sakafo.
* Adjuvant ny fitsaboana vehivavy amin'ny taovam-pananahana miaraka amin'ny estrogen-receptor tsara homamiadana vao haingana izay nahazo tamoxifen roa na telo taona ary navadika ho AROMASIN mba hahavitana ny totalin'ny dimy taona manaraka ny fitsaboana hormonal fitsaboana.
* Ny fitsaboana ny homamiadana mivoatra any amin'ny vehivavy voan'ny aretim-pivalanana izay efa nandrosoan'ny aretina tamoxifen.
Vovon-tsavona roapolo (107868-30-4) soa
Navoaka tao amin'ny 1998 ny fikarohana lehibe IES (Fandaharam-pandinihina) ary nampitaha ny famindrana ny Aromasin taorian'ny nanaovana tamoxifen tamin'ny 2 hatramin'ny 3 taona mba hijanonana amin'ny tamoxifen mandritra ny taona 5. Ny vokatra dia nampiseho fa ny fiovana amin'ny vovony aromasina ho an'ny 2 hatramin'ny 3 taona aorian'ny nahazoana tamoxifen 2 hatramin'ny 3 taona (noho ny totalin'ny 5 taona momba ny fitsaboana hormona fitsaboana) dia tsara kokoa noho ny mijanona amin'ny tamoxifen mandritra ny taona 5 ho:
* Mampitombo ny fotoana alohan'ny ahafahan'ny homamiadana miverina any amin'ireo izay miaina fahatsiarovana
* Fanimbana ny mety ho voan'ny homamiadan'ny sela vaovao eo amin'ny tratra
ho an'ny vehivavy voan'ny aretina azo avy amin'ny hormone-receptor-positive, voan'ny kanseran'ny nono.
Mety ho azon'ny FDA atao ny manaiky ny vovo-dronono aromasina ampiasaina hampihenana ny mety hisorohana ny loza mety hitranga amin'ny vehivavy tsy dia fantatra loatra.
Mividiana vovoka Exemestane avy amin'ny Buyaas.com
Ny Torolàlana Farany Ho An'ny Mpitsoa-ponenana mba hanasitranana ny homamiadana amin'ny vehivavy
Goss, PE, Ingle, JN, Alés-Martínez, JE, Cheung, AM, Chlebowski, RT, Wactawski-Wende, J., ... & Winquist, E. (2011). Ny fialan-tsiny momba ny fisorohana ny homamiadana eo amin'ny vehivavy. New England Journal of Medicine, 364(25), 2381-2391.
Yardley, DA, Noguchi, S., Pritchard, KI, Burris, HA, Baselga, J., Gnant, M., ... & Melichar, B. (2013). Everolimus plus exemestane amin'ny marary postmenopausal miaraka amin'ny HR + kanseran'ny nono: BOLERO-2 fandalinana tsy misy fivoarana farany. Fampandrosoana amin'ny fitsaboana, 30(10), 870-884.
Pagani, O., Regan, MM, Walley, BA, Fleming, GF, Colleoni, M., Láng, I., ... & Ciruelos, E. (2014). Adjuvant dia miseho amin'ny fanesorana amin'ny oviana amin'ny homamiadana eo an-kibo. New England Journal of Medicine, 371(2), 107-118.